General Cali Xersi Barre (Cali Gaab) ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo ka qayb qaata madaafiicda ka dhanka ah Madaxtooyada, – STAR FM SOMALIA
General Cali Xersi Barre (Cali Gaab) ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo ka qayb qaata madaafiicda ka dhanka ah Madaxtooyada,
Taliska Booliska Gobolka Banaadir, ayaa maanta sheegay in madaafiicda lagu weeraro Aqalka Madaxtooyada Somaliya (Villa Somalia), aanay ka dambeen Ururka Al Shabaab oo qura.
General Cali Xersi Barre (Cali Gaab), Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo ka qayb qaata madaafiicda ka dhanka ah Madaxtooyada, walow ay masuuliyadda madaafiicdu sheegtaan Ururka Al Shabaab.
Taliyaha oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha, ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin si khaldan xilal uga raadiya Dowladda Dhexe Somaliya, haddii aan la siina ay isu deyaan inay carqaladeeyaan xasiloonidda Caasimadda.
Taliyaha oo si adag u dhaliilay siyaasiyiintaasi, ayaa sheegay inay xilalka ku raadinayaan sifo guracan, isla-markaana uu maankoodu siiyay haddii aanay xilalka ka helin Dowladdu, inay arbushaad nabadda Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu shacabka reer Muqdisho uu ugu baaqay inaanay hay’adaha amniga oo keliya ku halayn suggida ammaanka Magaalada, isla-markaana ay soo sheegaan kuwa madaafiicda ka soo dhex tuuraaya Magaalada.
General Cali Gaab, ayaa bulshada ku baraarujiyay in ay cid kasta dan ugu jirto in meel looga soo wada jeesto waxa uu ugu yeeray kuwa carqaladeenaaya nabadgelyada Caasimadda, si loo helo deganaansho buuxdo.
25-kii bishii February, ayay ahayd markii illaa toddobo madfac lagu tuuray Villa Somalia,waxayna sababeen
Degmada afgooye ayaa lagu weeraray madaafiic hoobayaal ah